Soo dejisan Cheat Engine 7 – Vessoft
Bogga rasmiga ah: Cheat Engine
Wikipedia: Cheat Engine
Engine khiyaameeyaan – codsi is haysta oo waxtar leh si ay u dhex gasho in xogta kulan ee kala duwan. Khiyaameeyaan Engine waa awoodaa inuu fududeeyo heer dhib ciyaarta iyo waxay bixisaa si ay ciyaaryahanka heer sare ah stock caafimaadka, lacagta ciyaarta, hub iyo khayraadka kale. software The awood isbedelka qayb ka mid ah qiyamka iyo goobaha ka mid ah kulan ee ugu badan ee baahida shakhsi ahaaneed ee ciyaaryahanka. Sidoo kale software kuu ogolaanayaa inaad si ay u abuuraan khiyaameeya iyo tababarayaal gaar ah si aad u hesho in ay fulinta ee ciyaaraha. Khiyaameeyaan Engine gubtay khayraadka nidaamka ugu yar oo uu leeyahay interface a fudud.
Helitaanka khayraadka ciyaaraha aan xad lahayn
Abuurista сheats iyo tababarayaal
Dardar-dhaqdhaqaaqyo characters ’
Fududeynta ee heer dhib ciyaarta
Soo dejisan Cheat Engine
Faallo ku saabsan Cheat Engine
Cheat Engine Xirfadaha la xiriira
ArtMoney – softiweer waxaa loogu talagalay in lagu saxo qiimayaasha ciyaarta dhexdeeda sida tirada nolosha, tirada rasaasta, lacagta ama dhibcaha. Software-ka ayaa si sax ah ula shaqeeya kaliya ciyaartooyda kaliya.
Horizon – waa barnaamij wax ka beddelaya barnaamijyada ciyaarta oo loo adeegsado khiyaamada loogu talagalay qalabka loo yaqaan ’Xbox 360 console’. Software-ka wuxuu taageerayaa tiro badan oo cayaaro caan ah oo noocyo kaladuwan ah.
CheMax – waa barnaamij leh kayd macluumaad badan oo khiyaamo ah si loo fududeeyo marinka ciyaaraha kombiyuutarka. Softiweerku wuxuu kuu ogolaanayaa inaad geliso nambarrada iyo furaha sirta ah ee ciyaaraha caanka ah.
GameRanger – waa madal ciyaarta lagu ciyaaro shabakad maxalli ah oo lagu ciyaaro ciyaaro kala duwan. Softiweerku wuxuu kuu oggolaanayaa abuurista qolka caadada u ah wada ciyaarista asxaabta.
Khibradda GeForce – waa qalab ku habboon oo lagu cusbooneysiinayo darawalada kaararka garaafyada ee shirkadda NVIDIA. Software wuxuu kuu oggolaanayaa inaad dejiso dejinta ugu habboon ee ciyaaraha caanka ah.
ePSXe – tusaalaha Sony PlayStation console ciyaarta. Softiweerku wuxuu xaqiijinayaa ciyaarista diskiga ciyaarta iyo sawirradooda iyadoo la adeegsanayo waxyaabo dheeri ah.
Connectify Hotspot – barnaamij softiweer ah oo aad ku abuuri karto router kombiyuuter ah oo kombiyuutarkaaga kujira. Softiweerku wuxuu soo bandhigayaa macluumaadka faahfaahsan ee ku saabsan isticmaalka taraafikada ee marinka laga helo internetka.
Tani waa luuqada barnaamijka multilevel oo leh taageerada laybereeriga caadiga ah iyo qaab beddelaad buuxda si loo horumariyo barnaamijka ujeedooyin kala duwan.
Avast Pro Antivirus – fayras adag oo leh heer ilaalin heer sare ah oo ka horjoogsanaya fayrasyada inay galaan kombuyuutarka oo hubiyaan amniga shabakadda oo dhan.